पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको महाधिवेशनमा बिन्दुको प्यानललाई भोट किन ? – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको महाधिवेशनमा बिन्दुको प्यानललाई भोट किन ? – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको महाधिवेशनमा बिन्दुको प्यानललाई भोट किन ?
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३३ औं महाधिवेशन आगामी पुस २४ र २५ गते पोखरामा सम्पन्न हुँदैछ । महाधिवेशनले पछिल्लो समय पोखरामा चुनाबी माहोल तातेको छ । महाधिवेशन नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरुले घरदैलो कार्यक्रम गरी भोटको लागि प्रचार प्रसार सुरु गरेका छन।
महाधिवेशनको लागि यतिबेला २ प्यानलको समुह चुनाबमा होमिने भएको छ। यस्तै गरी २ प्यानल मध्य हामीले दमदार प्रतिस्पर्धी मानिएको प्यानल बिन्दु काेइरलाको समुह संग कुराकानी गरेका छौ।
उम्मेदवारहरु संग हामीले तपाईंहरुलाई चुनावमा व्यवसायीहरुले भाेट किन दिन? तपाईंहरुको याेजना के के छन ? पोखरा उद्योग वाणिज्य संघमा तपाईहरुको योगदान कस्तो छ ? प्रतिस्पर्धी समुह भन्दा तपाईहरुमा फरक के छ ? लगाएतका प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेका छौ।
अध्यक्ष पदको उम्मेदवार विन्दु कोइराला सुबेदी:-
व्यवसायी र राज्यको बिच पुल भएर काम गर्ने अध्यक्ष पदको दाबेदार मानिने विन्दु कोइराला सुबेदीकाले जानकारी दिएकि छिन। सुबेदीका अनुसार आफुसंग १४ वर्षको लामो अनुभव भएको र अनुभव संगै सबै व्यवसाय गर्ने मित्रहरु संगै रहेर सहकार्य गर्दै पाेखरा उद्योग वाणिज्य संघ चलाउने बताएकी छिन।उनका अनुसार आफुले विभिन्न पदमा कहिले कार्यासमिति सदस्य कहिले महिला उधममा काम गरेको र २ पटक सम्म उपाध्यक्ष भएर काम गरेको हुनाले अहिले सबैले यो चुनाबमा आफ्नो प्यानललाई साथ् दिने अपेक्षा गरेकी छिन।
उम्मेदवार सुबेदीका अनुसार बिगत ६५ वर्ष सम्म महिलाले नेतृत्व गर्न नपाएको संस्था हाे । महिलाको अद्यक्षतामा पाेखरा उद्योग वाणिज्य संघमा अब मेरो लागि उचित समय आएको हो भन्ने लागेर मैले उमेदवारी दिएकि छु । व्यवसायीहरुले बिगत लामोसमय देखि पुरुषहरुको को धेरै नेतृत्व हेर्नुभएको छ अब महिलाले चलाएको संस्था कस्तो हुनेछ यो हेर्नको लागि सबैले साथ् सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेकी छु।
बिगतमा सम्पन्न भएका १४ वटा मेलामा विभिन्न ठाउँमा बसेर मैले काम गरिसकेकी छु। आफुले कुशलता पुर्वक निर्वाहा गरेको व्यवसायीले देखेका छन् र उद्योग वाणिज्य संघले गर्ने नीति तथा कार्ययोजनामा म सहभागी भएको छु । आगामी दिनमा मैले कुशलता पुर्वक व्यवसायीकाे काम गर्नेछु। हिजो पूरा हुन नसकेको कामलाई पूरा गर्ने मेरो प्रमुख उद्यश्य रहेको छ ।
उपाध्यक्षका उम्मेदवार साेबित पाैडेल:-
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको उपाध्यक्षका उम्मेदवारको रुपमा रहेका छन युवा व्यवसायी साेबित पाैडेल। उम्मेदवार पौडेलका अनुसार व्यवसायी र राज्यको बिच पुल भएर आफुहरुले काम गर्ने बताएका छन। उनका अनुसार :- १४ वर्ष अघि देखि म विभिन्न पेसामा लागिरहेको छु । अन्य व्यवसाय भन्दा पर्यटन संग बढि आवद्ध रहेको छु । अहिले विभिन्न संस्थामा लागेर त्यहाँकाे नेतृत्व लिएर अगाडी बढेको छु । पाेखरा उद्योग वाणिज्य संघ थाेरै धमिलिएकाे र त्यहाँ सक्षम युवा, सक्षम नेतृत्व लिन सक्ने मान्छे, युवा अघि बढ्नुपर्छ भनेर म अघि बढिरहेको छु । काेराेना भाईसरकाे कारण पछिल्लो समयमा कर, कर्मचारी, घरबेटी लगायतका समस्या छन् यी विषयमा राज्यसंग मिलेर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा मेरो ध्यान जाने छ ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई सहमतिबाट नै अघि बढाउँ सकिन्थ्यो तर सहमतिको ढाेका किन बन्द भयो? सहमतिको लागि धेरै समय कुरेर बसेका थियौ तर सहमति हुन सकेन । प्रजातान्त्रिक प्रणाली अनुसार अघि बढ्ने भनेर अघि बढेका हाै । सहमती थाेरै कुरामा मात्र नमिलेको हाे । मिलाउन चाहेको भए मिल्थाे हाेला हामी तडक भडक नगरी निर्वाचनमा गैरहेका छाै । बिन्दु काेइरलाकाे टिमलाई भाेट दिएर जिताएर एकपटक पाेखराकाे बिकास गर्ने जिम्मा हामीलाई दिनुहोस् । हामी विशुद्ध भावनाले काम गर्न जाने हाे |
महासचिव पदका उमेदवार धनिराम बराल :
लामो समयदेखि व्यवसाय क्षेत्रमा लागेको हुनाले महासचिव पदका लागि मैले उमेदवार दिएको छु। व्यसायीले पनि मुल्यांकन गर्नुपर्ने केही कुरा रहेको छ। विगत धेरै वर्ष अघिदेखि थुप्रै संस्थाकाे नेतृत्व गरेर संस्थालाइ उचाइमा पुर्‍याउने काम गरेको छु । पहिला पाेखरा उद्योग वाणिज्य संघमा बसेर काम गर्दा पाेखराकाे मुख्य अाकर्षक पाेखरा प्रर्दनी केन्द्रमा हुने अाैधेगिक व्यापारीक मेलाकाे सुरु गरेको हाै । त्यो समयमा सुरक्षा र वजार व्यवस्थापनकाे जिम्मा लिएको थिए । हामी विशुद्ध भावनाले काम गर्ने भएकाले टिमलाई जिताइदिनुहाेला भन्न चाहान्छु।
काेषाध्यक्ष पदका उम्मेदवार तारानाथ ढुङ्गाना:_
पाेखराका विभिन्न व्यापारीक र सामाजिक संघ संस्थामा रहेर मैले काम गरेको छु । विभिन्न स्थानमा काम गर्दै म नेपाल मदिरा व्यवसायी संघकाे केन्द्रीय महासचिव पदमा बसेर पनि काम गरेको छु । यस भन्दा अघि पनि पाेखरा उद्योग वाणिज्य संघको बाहालवाला सदस्य हाे र यहाँ पनि मेरो जिम्मामा परेको सम्पुर्ण काम सफलताको साथ सम्पन्न गरेको छु । अग्रजलाई सम्मान नयाँलाई प्रोत्सान भन्ने नाराकाे साथ हामी बिन्दु काेइरला दिदिकाे प्यानलबाट अघि बढेको छाै । याे टिम सफल हुन्छ । ६७ वर्षा पुरानो इतिहास बाेकेकाे पाेखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई याे टिमले नेतृत्व लिन सक्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई पनि भन्छु यहाँहरुले दिनुभएको मतकाे अभिभारा हामीले पूरा गर्ने छौ । अग्रजले गरेको भन्दा राम्रो काम गर्ने छौ। याे टिमले गर्न सक्छ हामी सक्षम छौ र हामी सफल हुन्छौ। अहिले पाेखरा उद्योग वाणिज्य संघमा आवस्यक प्रयाप्त पैसा छैन । पाेखरा उद्योग वाणिज्य संघले पाेखराकाे विभिन्न ठाउँ लिएको जग्गाको प्रयाेग गरेर आयस्रोत बनाउन मिल्छ । उद्योग वाणिज्य संघको आयस्रोतकाे लागि मेरो ध्यान जानेछ । म सम्पुर्ण भाेटरलाई के भन्न चाहान्छु भने उद्योग वाणिज्य संघमा मलाई एकपटक काम गर्ने अबसर दिनुहोस। तपाईंहरुको मतकाे सदुपयोग गरेर पाेखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई एउटा उचाइमा पुराएर देखाउछु ।
उप महासचिव पदका उमेदवार धर्मराज बैताैला ;-
राजनिती एउटा पाटाेमा राखेर व्यवसायीककाे हितमा उठेकाे छाैँ । सबैलाई घरमा चाहिने इन्धन व्यवसायी हुँ म २०७२ सलाकाे नाकाबन्दीमा पनि सबैको घरमा चुलाे बाल्ने काम गरेको छु । गृहलक्ष्मी ग्यासकाे अध्यक्ष र पाेखरा उद्योग वाणिज्य संघको उप महासचिवकाे स्वतन्त्र उम्मेदवारकाे हिसाबले भन्नुपर्दा राजनितीलाई एउटा पाटाेमा राखेर व्यवसायीककाे कसरी हक हित हुन्छ भनेर म उठ्न खाेजेकाे हाे । पाेखरा उद्योग वाणिज्य संघको लागि सबै राम्रो र परिपक्व उमेदवार राेज्न मेरो अनुरोध छ । पाेखरा एउटा व्यापारीक सहर हाे यस्काे बिकासकाे लागि उद्योग वाणिज्य संघको ठुलो भुमिका हुन्छ ।
कार्यासमिति सदस्य पदकाे उम्मेदवार पवित्रा गुरुङ:-
व्यवसायकाे समस्या हल गर्न चुनावमा हाेमिएकाे हाे | महिलाको हक हितको लागि सामाजिक क्षेत्रमा ३ दशक देखि काम गरेको यहाँहरुलाई जानकारी छ । लामाे समय सम्म सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेपछि उद्योग व्यवसायकाे लागि पनि अब केही गर्नु पर्छ भन्ने लागेर मैले सदस्य पदका लागी उमेद्धारी दीएको छु। हाम्रो टिमलाई जिताइदिनुहाेला भन्दछु ।
सदस्य पदकाे उम्मेदवार विनोद केसी
हाम्रो प्यानले जित्छ पाेखरा उद्योग वाणिज्य संघ कार्यासमिति सदस्य पदकाे उम्मेदवार विनोद केसी अग्रजलाई सम्मान नयाँलाई प्राेशहान भनेर नै म चुनावमा हाेमिएकाे हुँ । बिन्दु काेइरलाकाे प्यानमा राजनिती नभइ हरेक प्रकारका व्यवसायी मात्र छाैँ । म हार्डवयस व्यवसायमा आवद्व छु । हार्डवयर एसाेसियशनमा छलफल गरेर मैले उमेदवारी दिएको हुँ । अन्य व्यवसायीकाे पनि सहयोग छ । हाम्रो प्यानले नै जित्छ भन्ने मलाई पुर्ण विश्वास छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको January 6, 2021 January 6, 2021 119 Viewed